Ciil-mooge oo sheegay in dib loo billaabi doono adeegyada boostada
Wasiirka warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Ciil-mooge Xirsi ayaa shaaca ka qaaday in horraanta sannadka cusub ee foodda nagu soo hayo dib loo furi doono xafiisyada boostada oo xirnaa muddo ka badan 20 sano.
Walow ay gebi ahaanba burbureen kaabayaasha isgaarsiinta, bangiyada, waddooyinka iyo adeegyada bulshada ayuu wasiirka rajo ka qabaa inay wasaaraddiisa sida ugu dhaqsaha badan u suurtageliso dib u furidda adeegyada aasaasiga ah ee boostada.
Ciil-mooge wuxuu sheegay in Soomaaliya laga cafiyay lacag deyn aheyd oo dhan hal milyan iyo bar oo dollar, laguna lahaa adeegyada boostada iyo isgaarsiinta dalka xilligii dowladdii dhexe.
Dib u howlgelinta adeegyada boostada ayaa ahmiyad weyn u leh shacabka Soomaaliyeed oo tan iyo burburkii dowladdii dhexe ku khasbanaa inay hababkii waayadii hore u isticmaalaan diridda alaabtooda iyo waraaqahooda.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa waraaqaha iyo alaabta ay diraan waxay u sii dhiibaan dad safar ah, iyadoo xilli kasta aanan la dammaanad qaadi karin in wixii ay direen la gaarsiiyo dadkii ay u direen.